Labo ka mid ah xiddigaha Kooxda Chelsea oo go’aansaday inay Todobaadyada soo aaddan ka tagaan garoonka Stamford Bridge – Gool FM
(London) 28 Juunyo 2019. Labada ciyaaryahan ee Marcos Alonso iyo Davide Zappacosta ayaa la soo warinayaa inay doonayaan inay ka tagaan kooxda Chelsea inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan.
Chelsea ayaa haatan tababare la’aan ah, waxaana la filayaa in maalmaha soo socda ay macallinkeeda cusub u magacaabato Frank Lampard, halka Blues aysan awood u lahayn inay la soo saxiixato xiddigo cusub maadaama ay suuqa kala iibsiga ka ganaaxan tahay.
Yeelkeede, Jariiradda The Telegraph ayaa warinaysa in labada ciyaaryahan ee ka tirsan safka kooxda koowaad inay go’aansadeen inay isaga tagaan garoonka Stamford Bridge inta lagu guda jiro lixda todobaad ee soo socota.
Alonso ayay 23 milyan oo gini uga soo qaateen Fiorentina sanadkii 2016-kii, waxaana uu u dhaliyey Blues 18 gool 120 kulan oo uu u saftay, laakiin difaacan garabka bidix ayaa si joogto ah waxaa ugu orinayey oo ugu qeylinayey Taageerayaasha kooxda xilli ciyaareedkii la soo dhaafay.
Dhinaca kale, Zappacosta ayaa si xoog leh ugu ciyaaray kooxda ka dhisan Galbeedka Magaalada London 12-kii bilood ee la soo dhaafay, laakiin waxa uu kaliya ku soo bilowday safka hore hal kulan oo horyaalka Premier League.
Si kastaba ha ahaatee, sida ugu fiican kooxda Chelsea ayay u badan tahay inay u ogolaato mid ka mid ah labada ciyaaryahan inuu kooxda ka tago waqtigan.
Xilliga ay Juventus sida rasmiga ah ugu dhawaaqi doonto heshiiska Adrien Rabiot oo la shaaciyay